Ny fahafatesan'ny masoivohon'ny firaketana | Martech Zone
Alarobia, Desambra 1, 2010 Alakamisy, Jolay 2, 2015 Douglas Karr
Ny morontsiraka dia morphing ho an'ny maso ivoho.
Tamin'ny herinandro lasa teo dia niantso antso an-tsena tsy latsaky ny 5 aho izay efa manana mpamatsy tolotra ny prospect, misafidy mpamatsy, na efa manana masoivoho. Orinasa iray no nanakaramanay anay hampisondrotra ny laharan'ny motera fikarohana azy ireo. Rehefa avy nandinika ny tranokalan'izy ireo aho nandritra ny iray minitra dia nampahafantariko azy ireo fa izany dia ezaka goavana natao tamin'ny CMS taloha. Nifandray tamin'ny masoivoho nanangana ny tranokalany ho azy ireo izy ireo ary nanome azy ireo fotoana fohy avy hatrany ilay maso ivoho hanatsarana ho CMS vaovao. Fa maninona no tsy navelan'izy ireo hampahafantatra azy ireo mialoha izany?
Orinasa iray hafa no nasainay nanao fahazotoana tamin'ny sehatra fitorahana bilaogy. Ny olana dia ny fanontaniana napetrak'izy ireo dia tsy mifanaraka amin'ny tanjaky ny lampihazo. Fa maninona no tsy fantatr'izy ireo ny isa mivarotra amin'ny lampihazo? Fiantsoana varotra maimaika izay tsy namantaran'ny ekipa tsara ny filan'ny prospect na ny haren'izy ireo.
Izahay dia miezaka mafy amin'ny orinasa hafa handinika ny fampiharana SaaS izay tadiavin'izy ireo hividy. Ny orinasa dia nanakarama anay noho ny zavatra niainantsika tamin'ny habaka SaaS sy ny fahalalantsika ny haben'ny fampiharana eny an-tsena. Nanana ny ekipany momba ny vokatra sy ny teknolojia anatiny izy ireo - saingy te hanana vaovao jereo.
Tsy izahay no misafidy mahazatra anao… na hoy aho nieritreritra. Ao amin'ny tatitry ny haino aman-jery an-tserasera farany avy amin'ny eConsultancy, hitan'izy ireo ny fironana amin'ny masoivoho sy ny fomba fampiasan'ny mpivarotra azy ireo. Tena manaitra ny valiny… ary mahazatra!
Tsy hisy intsony Masoivoho mifandraika amin'ny firaketana an-tsoratra - Rehefa manamafy ny fananan'izy ireo ny orinasam-panjakana ary mampidina ny silo, dia tsy ilaina ny misafidy mpivarotra nomerika ho toy ny "maso ivoho firaketana." (Ity dia ankoatry ny fiheverana ny hoe "AOR" izay very dikany satria ny mpivarotra dia misafidy ny hanaparitaka ny teti-bolan'ny dokam-barotra amin'ireo magazay isan-karazany.) Rehefa nidina ny rindrina teo anelanelan'ny nentim-paharazana sy ny fifandraisana, dia voatery ny vondrona nomerika misafidy amin'ny fidirana an-tsehatra ao anatin'ny sehatry ny masoivoho lehibe kokoa na ny fanamby amin'ireo masoivoho nentin-drazana mba hifehezana lehibe kokoa ny kaonty media tsirairay.
Ny isan-karazany amin'ny fifaninanana eo fivarotana nomerika nomerika hanitatra - Ny fitadiavana ady eo amin'ny fividianana haino aman-jery nentim-paharazana sy an-tserasera dia ho taratra manerana ny tontolon'ny varotra. Raha lazaina amin'ny teny hafa, rehefa mitaky fomba tena "holistic" amin'ny marketing ny mpanjifa, ny ady hitarika fampielezan-kevitra dia tsy vitan'ny lehilahy sy vehivavy fotsiny, fa ny orinasan'ny PR sy ny trano nomerika mamorona ary ireo manam-pahaizana manokana amin'ny media sosialy koa.
Ny fivoahan'ny Fifandraisana mifandraika - Rehefa milalao ireo ady ireo, ny firafitry ny orinasa mitazona lehibe kokoa dia hitady hirindra ireo faritra samihafa miaraka tsy misy hatrizay. Mazava ho azy, ny antony nitazomana ireo orinasam-pivarotana maro be, nanomboka tamin'ny famoronana, hatramin'ny drafitra ary ny fividianana, hatramin'ny PR ka hatramin'ny consultant marketing sy fampiasam-bola dia ny fametrahana effet Gestalt lehibe kokoa, izay lehibe kokoa noho ny ampaham-bolany rehetra. Tsy ilaina intsony ny milaza, na eo aza ny efa ho 30 taona niasa tamin'io maodely io, vitsy ireo orinasa mitazona no afaka milaza marina fa nahatratra io tanjona manokana io, na dia azo antoka aza fa nisy ny fidirana an-tsehatra.
Miaraka amin'ny rakibolana taloha, miaraka amin'ilay vaovao - Taloha, ny teny toa ny "GRPs," "impression" ary "tsindry", dia nanjary fenitry ny fandrefesana ny mpihaino amin'ny resaka fitarihana ny fandaniam-bola sy ny famaritana ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra. Ny maha-zava-dehibe ireo teny ireo dia tsy dia ilaina loatra. Izy ireo dia mety hosoloin'ny fiheverana ny "lanja mandritra ny androm-piainana", "sentiment / favourability" ary "influencer." Na ny fampiasana ny "mpihaino" aza dia vonona amin'ny volon'ny tantara, satria manondro vondron'olona mandalo. Amin'ny vanim-potoanan'ny Aterineto “mirona” amin'ny haino aman-jery iray sy ny fiakaran'ny media sosialy, ny teny iray marina kokoa hamaritana ireo mpanjifa tadiavin'ny mpivarotra dia ny "mpandray anjara."
Lisitra nalaina avy ao amin'ny Tatitry ny media an-tserasera avy amin'ny eConsultancy.
Ao no misy izany Highbridgeny fitomboany dia… tao amin'ny Fifandraisana mifandraika toerana. Nanjary mpanelanelana amin'ny vondrona marketing sy ny mpanome serivisy ary ny vokatr'izy ireo, ny mpifaninana aminy, ny mpanjifany, ny vinan'izy ireo, ny mpivarotra azy, ny orinasan-dry zareo PR ary ny masoivohon'izy ireo. Fotoana mampientanentana ho anay ary mahafinaritra ny mahita ny fanamarinana ny maodelinay momba an'ity orinasa ity amin'ity tatitra ity.
Raha maso ivoho - tonga ny fotoana hanovana fitaovana, na mafy toy inona aza. Mila miara-miasa amin'ireo mpivarotra hafa manana fahaizana manokana ianao… na dia misy mifanindry aza ny entana. Ao ny Coopetition. Raha orinasa ianao - fotoana izao handinihanao ny sainao Maso iraisam-pirenena ary araraoty ny fahasamihafan'ny matihanina any izay afaka manampy anao handresy ireo fanamby media vaovao.
Aug 16, 2012 amin'ny 11: 36 AM
Lahatsoratra tsara! Nankafy izany ary manaiky ny hevi-dehibe nataonao.
3 Oktobra 2012 à 9:54
Tena nahafinaritra an'i Douglas ity lahatsoratra ity. Tsy mahita afa-tsy zavatra tsara isika isaky ny manatona ny masoivoho hafa.